Ukuphakama kukagesi wesitolo esidayisa yonke impahla imodeli yedeski lekhompyutha elungisekayo Imodeli ye-HA-01 Umkhiqizi Nomhlinzeki |I-TwoBlow
Ukuphakama kukagesi imodeli yedeski lekhompyutha elungisekayo Imodeli HA-01
Ubukhulu bomkhiqizo:140x 60 x (75-120) cm
Isisindo Sento:66.2 amakhilogremu
• Ideski Eliguquguqukayo Ubude: Ideski Lekhompyutha Eliguquguqukayo eline-4-Level Mechanical Lifting Height elifanele ukuma okuntofontofo kakhulu.Ungakwazi ukuphakamisa kusuka ku-75 kuya ku-120cm.
• Inzuzo Yayo Ehlelekile: Ithimba labantu abangaphezu kwe-100 linolwazi kubuchwepheshe bethu obuhamba phambili.Ideski Lekhompiyutha Eliguquguqukayo Lobude seliphumelele isitifiketi se-CARB liqinisekisa ukuvikeleka okuphelele kwakho nomndeni wakho.
• Okutholayo: Ideski Lekhompyutha Eliguquguqukayo Lokuphakama Kwe-It, i-Mouse pad, ithuluzi lokufaka, iphepha lemiyalo yokufaka.Umhlahlandlela wokwamukela, iwaranti yethu yezinyanga eziyi-12 engenakukhathazeka, kanye nesevisi yamakhasimende enobungane.Amaphaneli edeski amabili aphuma ephaketheni elifanayo.
• Isevisi Yekhasimende Yempendulo Esheshayo: Ukusebenza kahle nomsebenzi ukuzibophezela kwethu kuwo wonke amakhasimende, futhi i-oda ngalinye linesiqinisekiso sezinsuku ezingu-30 esingenabungozi.Uma unezinkinga, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Yini oyitholayo ephaketheni?
• Ideskithophu Yekhompyutha Ehlelwa Ubude Obuhlelekile
• Iphedi yegundane
• Ithuluzi lokufaka
• Iphepha lemiyalo yokufaka ngokunembile
Indawo enkulu yobukhulu: 140 * 60 cm
Uma ungumthandi wegeyimu, ungasetha amamonitha ama-3 ngokulinganayo.Ubungeke wesabe ukuthi ideski lincane kakhulu ukuthi lingamela indawo yakho.
Ideski lobude obuqinile futhi obulungisekayo
• Ithebula layo lokubhala lemidlalo ehleliwe lilayisha ubuningi obungu-120 KG elinikeza insimbi emsulwa.
• Nge-4-Level Mechanical Lifting Height evumelana nokuma okunethezekile kakhulu.Ungakwazi ukuphakama kusuka ku-75-120 cm.futhi usuke ekhanda elibuhlungu nobuhlungu beqolo.
Ideski lehhovisi lasekhaya Elihlelekile elihlanganisa imiqondo emincane kanye nobuhle bomugqa besimanje.
Okwedlule: Ideski lokuphakamisa imodeli yesitayela esiyingqayizivele Imodeli HA-02
Olandelayo: I-Gaming Chair Model 1709-S
I-Aldwin Home Office Lift Top Desk
I-Computer Lift Desk
Phakamisa Ideskithophu Yekhompyutha Ephezulu
Phakamisa Ideski Eliphezulu Ngamadrawer